Amanyathelo ama-16 okuNyanzelisa ukudala uMxholo | Martech Zone
Amanyathelo ali-16 okuNyanzelisa ukudala uMxholo
NgoLwesine, Julayi 17, 2014 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha uluhlu lokutshekisha lwenza ubomi bube lula kwaye le intle kakhulu kwimibono yokuphuhlisa umxholo wokunyanzelisa umxholo Uphendlo lweWebhu SEO. Ndiyalithanda icebiso apha kuba lihamba ngaphaya kwemithombo yeendaba kwaye yalatha kwezinye izinto ezenza ukuba ukutya umxholo kube lula nako.
Amanyathelo ali-16 okuNyanzelisa ukudala indalo:
Fumana inkuthazo kwinethiwekhi yakho.
Zama umxholo omfutshane, omfutshane.
Sebenzisa iindaba zeshishini.
Sebenzisa imifanekiso ukuyibuyisela umva.
Mema iindwendwe ngeembono ezintsha.
Fikelela kubaphulaphuli bakho ngezihloko.
Phinda uphinde uphinde wenze umxholo ofanelekileyo.
Nyaniseka kwindlela oyiqonda ngayo isihloko.
Yenza umsebenzi wakho wesikolo kwaye wenze uphando ngesihloko.
Yenza ukukhangela kube lula kwaye unikeze indlela yokuzibandakanya.
Gcina izihloko kunye namaphepha okufika ahlukaniswe.
Gwema izihloko eziza kuhamba.
Khuphela ividiyo kunye nevidiyo.
tags: ubude benqakuubukhulu bokulumaUmxholo onyanzelayoukudalwa komxholoUkuThengiswa kweMpahlaukuncokolaizithuba zeendwendweIndwendweumsebenzi wasekhayanya nisekaimifanekisoimifanekisophe fumlelweintathelimaphephaAccessiindaba-jackiindaba -ingobungqinaukujongaiifotofikeleleUkunika amandla ukuthengisaSEOCela umxholoamanyatheloimpumeleloixesha elifanelekileyoukubhaliselwawebsearch seo
I-PassbeeMedia: Ikhuphoni yeFowuni egqibeleleyo, iWallet kunye neQonga lokunyaniseka
I-Google Official Analytics Apps ze-iPhone kunye ne-Android